IINGCAMANGO EZINGAMA-50 EZILUNGILEYO ZOMTSHATO WELIZWE IINTLIZIYO ZERUSTIC ZIYA KUTHANDA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iingcamango ezingama-50 zoMtshato weLizwe kwiMibhiyozo yeBucolic
Iingcamango ezingama-50 zoMtshato weLizwe kwiMibhiyozo yeBucolic
Nokuba uyayithanda iRustic Rocky Mountains okanye i-England yasemaphandleni, kukho umbono ophefumlelweyo apha kuwo wonke umntu, kunye neengcebiso zokufuna ukwazi ezivela kwiingcali. U-Lauren R Swann Ufoto, Indawo: I-Covered Bridge Inn, Uyilo lweentyatyambo: Ipati yeGadi, UCwangciso loMsitho: iGrit & Grace
Ukuhlaziywa kuka-Mar 03, 2021
Ngenxa yokuba ubuninzi beendawo zaseUnited States ziintaba okanye umhlaba wefama, akumangalisi ukuba izibini ezininzi zijonge emaphandleni ukuze zikhuthaze umtshato xa Ukuthatha isigqibo ngomxholo wokubhiyozela . Nangona kunjalo, imitshato ephefumlelweyo yelizwe iguquke kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ngelixa iingqayi zamasoni, amabhali e-hay kunye ne-DIY burlap centerpieces ziye zalawula ngokugqwesileyo, ilizwe eli-aesthetic likhule ngakumbi licokisiwe kwangoko. Kunye nezinye zeengcali zeshishini lethu esizithandayo, silapha ukukubonisa indlela efanelekileyo yokufaka izinto zelizwe kumnyhadala wakho ngendlela engapheliyo eya kuthi izonwabise iindwendwe zakho zomtshato.
UCassy Anderson we Iziganeko zeCassy Rose ikhuthaza ukuba-yi-weds ukuba ikhumbule 'ukuba' ilizwe 'lininzi malunga nokuziva kwamava njengoko kunjalo malunga nezinto ezibonakalayo. Uninzi lunokufumanisa ukuba batsaleleke kancinane kubuhle 'belizwe' kwaye ngakumbi kubuhle bobugcisa baseMelika nakwindawo evakalelwa ukuba yamkelekile kwaye ifudumele. Zama kwaye ucime ukubonakaliswa kwe-trite kwaye endaweni yoko ufake izinto ezingaphezulu kwe-rustic kwiindlela zangoku. Umzekelo, endaweni yesikhululo sepayi esenziwe ngaphezulu (kodwa esimnandi) sokwenza idessert, sebenza nomxube wakho wezonyango ukuze eze neecocktails ezikhethekileyo ezinencasa njengepie yeapile bourbon yeti emnandi. Yiphake kwiglasi ekhethekileyo, kwaye uzenzele i-cocktail entsha enelothe yelizwe. Uqhubeka ngokuqaphela ukuba 'ayizizo zonke izinto zoyilo ekufuneka zibandakanywe ngokulinganayo kuyo yonke imiba yomsitho. Oku kuyinyani ngemibala kunye nokwenziwa. Kwimitshato yelizwe ngokukodwa, oku kubaluleke ngakumbi kwaye, ngokunyanisekileyo, into encinci yento ihamba ngendlela ende. Ukuba uthandile ngengubo yelace, yiya ngayo! Kodwa sukuziva ubophelelekile ngoku ukufaka ileyisi kwipateni yesimemo kunye noyilo lwekhekhe, njlnjl. into oyifakayo, jonga ukuyikroba ngento engalindelekanga ukunqanda izinto uzive udiniwe. Umzekelo, jonga 'imitya' yesikhumba enomtsalane endaweni yamasongo e-napkin asemthethweni. '. Ukugcina eli cebiso engqondweni kuya kukunceda wena kunye neqabane lakho ukuba nenze umtshato oziva ubucolic ngaphandle kokuziva udiniwe okanye ugqithile. Ngaphambili uyakufumana zonke izimvo ozifunayo ukuqala ukuzisa izicwangciso zomtshato wakho zelizwe kunye.
Umahluko phakathi kwelizwe kunye neMitshato yaseRustic
Iingcamango zomtshato welizwe
Ilizwe-eliphefumlelweyo Imibono yeZinto zoMtshato
Ukuphefumlelwa kweMfashini yelizwe
Ilizwe-eliphefumlelweyo leMibono yeentyatyambo zoMtshato
Iingcamango zomtshato welizwe kunye nezilwanyana
Ilizwe-eliphefumlelweyo Imibono yoMsitho woMtshato
Ilizwe lomtshato weLock Cocktail Ukuphefumlelwa
Ilizwe-eliPhefumlelweyo lokuLamkela uMtshato ngeMibono
Iingcamango zekhekhe lomtshato welizwe
unokuba nesicakakazi ezimbini seembeko
Kufuneka kuqatshelwe ukuba imitshato yelizwe ayifani nemitshato ye-rustic, nangona ezi ndlela zimbini zabelana ngokufana okuninzi. Njengoko u-Anderson ephawulile, umtshato welizwe uquka zonke izinto zoyilo kunye neemvakalelo ezisezantsi emhlabeni. Ngeli xesha, i-rustic ngokungqongqo yistayile yoyilo, egxile kwindalo nakwizinto eziluhlaza. Umzekelo, unokubandakanya iitafile zerustic kwilizwe lakho kuyilo lomtshato, kodwa iitafile zodwa aziluniki ulwamkelo ilizwe lazo. Ukubeka ekubukeni iindwendwe ngokufudumeleyo, ukwenza ulwazelelelo ngolwazelelelo kunye nokugxila eluntwini kuya kunika ukujonga okuthe ngqo kwelinye ilizwe. Ngokufanayo, umtshato welizwe awunayo i-by-book-rustic aesthetic. Cinga ngothando lwasemaphandleni lwesiNgesi okanye amasimi e-lavender asasazekileyo eProvence, eFrance. Ezi ndawo ziboleka nje kumtshato welizwe kanye nelizwe laseTexas Hill. Ukubeka ngokulula, bobabini uGrant Wood waseMelika waseGothic kunye noVincert Van Gogh's Starry Night banokuba yimithombo yenkuthazo yemibhiyozo yomtshato welizwe elimangalisayo.
Imizobo yakho yomtshato yimifanekiso oza kujonga kuyo kwiminyaka ezayo I-albhamu yomtshato kunye neprints iyalelwe ikhaya lakho. Yizisa ubuntu obuncinci kule mifanekiso ngokuzizalisa kunye neendawo ezisemaphandleni zivakalelwa kukuba yonke imibhiyozo yakho iyabonisa.
1. Iifoto zemitshato yomtshato
UMikhail Glabets Umtshato Wezithombe
Uvuyo lwalunokuchaphazeleka ngokupheleleyo njengoko la magumbi athabatha ijikeleza ebaleni ngexesha lokutshona kwelanga.
2. Imizobo yomtshato eneebhokhwe
Kuqala Kuza Uthando Ifoto
Kulo mtshato wangaphandle, esi sibini sahambahamba ngeebhokhwe ezimbini-leyo ikufutshane nobomi belizwe njengoko unokufumana ngomhla wakho womtshato.
3. Izibini zemizobo kumhlaba weLavender
UMaura Jane Photography, Indawo: Los Poblanos Historic Inn kunye neFama yeOrganic
Nangona umtshato wesibini weli lizwe wenziwa eCalifornia, iifoto ezithathwe kwibala le-lavender zanikela imbeko kwilali yaseFrance. UKristen Gosselin we Imicimbi ye-KG kunye noYilo iyavuma: 'Xa uyila umtshato wakho welizwe langoku, thatha iindlela ezimbalwa kuyilo lwaseFrance. Isitayile selizwe laseFrance asiphumi ngaphandle kwesitayile. Idibanisa ngokugqibeleleyo imeko ehlaziyiweyo kunye nokuzola, ukuziva uzolile welizwe. '
4. Imini Yomtshato Yomzobo ebaleni
UKelly Czupkiewicz , Indawo: Blue Vista
Kwimizobo ngexesha lomtshato wesitayile selizwe e-Kansas, umfaki-zithombe wayenemikhwenyana yokuhamba ngengca ende.
Ukusuka kwizimemo zakho ukuya kumhla-wezinto ezinje ngeenkqubo kunye neempawu, uyilo lwakho lwezinto zokubhala ludlala indima ebalulekileyo ekunxibelelaneni, nasekuqiniseni umxholo womtshato owukhethileyo.
5. I-Antler Monogram Rustic Stationery
UMike Cassimatis Photography, Izinto zokubhala: Iphepha leCheree Berry, UCwangciso loMsitho: Iziganeko zoMntu wonke
I-monogram yesiko, ene-antler motif, yongeze ilizwe liziva kule ndawo yokubhala yesi sibini. I-monogram yavela kaninzi kwimihlobiso yomtshato-ukusuka kumtshato wecookie ukuthanda ukuya kwii-koozi zesiko kunye nomqondiso kwimoto yokubaleka kwesi sibini.
6. I-Desert Cacti Stationery Idea
UKayla Barker oLungileyo woFoto, Izinto zokubhala: la Vuyo
Umzekeliso we-cactus wazicacisa iincwadana zenkqubo kulo mtshato mhle kwilali yaseTexas.
7. Izinto zokubhala eziphefumlelwe yiNtaba
Ifoto yeNarrett, Izinto zokubhala: Zenziwe zalapha
Esi simemo somtshato asivanga nje ngendalo kunye ne-bucolic, isitayile seflethi-ebekwe ngeebhutsi zeenkomo ezongezwe kwilizwe.
8. Wood Umqondiso Camping
UChad Munro Ukufota
Endaweni yetshathi yokuhlala yesiqhelo, esi sibini sasinophawu olukhokela iindwendwe kwiintente ababeza kuhlala kuzo ngexesha lomtshato osenkampini.
9. Umqamelo weMonogrammed yoMmandla weLounge
Amagqabi eMagnolia kunye neempondo zinika umjelo wokuphosa ubonwa njengenxalenye yefenitshala yokuphumla yokubeka iseti yelizwe elisemazantsi.
Njengokuba besesitshilo ngaphambili, umtshato welizwe umalunga nokuyilwa kokuhonjiswa, uya kuthi gqi kukuziva kukhulu kunye nesimbo somtshato wonke, kwaye ukhetho lwefashoni luyinxalenye yoko.
10. Iibhutsi zeCowboy zomtshato
Ifoto kaJoanna Robertson
Iibhotile zeCowboy zongeza kwangoko idosi yobuntu bokutya nakweyiphi na impahla yomtshato. Lo mtshakazi ukhethe iibhutsi ezimhlophe zeenkomo kwisinxibo sakhe semihla. Cinga ukufaka ipati yomtshato wakho okanye abatshatileyo kwiibhotshi zeenkomo kunye neminqwazi yenkomo kunye nokuqhubela phambili ukukhulisa inkangeleko.
indlela yokwenza iitopheki zekhekhe
11. Izambatho Zasehlotyeni Emaphandleni
Ingelosi uPatricia Ifoto , Isinxibo somtshato: Umtshato kaDavid
Rhoqo i-tuxedo emnyama-tie inokuziva ingaphandle kwendawo kumtshato welizwe wase-rustic. Isinxibo sekhaki somyeni (esidityaniswa nokubonakala komntu obambe umsesane) sihambelana kakuhle nomtshato wasekhaya wehlobo.
Iintyatyambo ziyinxalenye enkulu yomtshato, kodwa xa kuziwa kwimitshato yelizwe, amalungiselelo akho eentyatyambo yindawo enhle yokuqhubela phambili ukuhambisa ukukhululeka, phantsi komhlaba.
12. Ukucwangciswa kweentyatyambo ezikhululekileyo
UKayla Barker oLungileyo woFoto, Uyilo lomsitho: Uyilo lukaMayhar
Ukukhetha iintlobo zeentyatyambo ezifanelekileyo kunokuba ngumsebenzi omkhulu. Ukwenza kube lula, cinga ngeentlobo zeentyatyambo ezenzeka ngokwendalo ezilalini. Apha, umyili weentyatyambo ubandakanye inkunzane kunye nohlaza oluhlaza ukuzisa imvakalelo eluhlaza kulungiselelo.
13. Ukucwangciswa kweentyatyambo zaseRustic
Iintsiba kunye neTwine Photography, Uyilo lweentyatyambo: UDavy Grey
Isitayile esivulekileyo, esiphilayo sale mibhiyozo yeendlela zomgaqo zibethe isikhonkwane entloko. Ukuba ufuna umtshato oziva ukhululekile kwaye uhlala ekhaya, amalungiselelo e-uber ale mihla ayisiyondlela yokuhamba.
14. I-Bouquet yomtshato okhululweyo
Imibala ethambileyo yepesika, icaramel kunye nohlaza yazisa isipha somtshakazi kulomtshato umhle eTexas ebomini.
15. Ibhayisekile yokubaleka elungiselelwe ukuCwangciswa kweentyatyambo
UKylee Yee Ukufota, Uyilo lweentyatyambo: I-Rose Shed
Zimbalwa izinto ezivakala ngathi zithandana ngaphezu kokuhamba ngebhayisekile kwilizwe elisisiNgesi. Ukuba awukwazi ukuyenza eNgilane ngenxa yabatshatileyo bakho, cwangcisa umtshato obalaseleyo ngebhayisekile ophumayo endaweni yoko.
16. IiNdawo zeli lizwe zala maxesha
UCory Ryan Photography, Uyilo lweentyatyambo: I-Rosehip Flora
Amaqunube kunye nemidiliya yanika ezi ziko zibukhali iintyatyambo zasendle.
Ngaba ucinga ngokumema ii-VIP ezinemilenze emine emtshatweni? Vumela ezi zimvo zomtshato zilungele ulwalamano lwakho lwezimenywa.
17. Ihashe emtshatweni
URachel Havel Ukufota
Akukho mtshato wasefama ogqityiweyo ngaphandle kwehashe ekungeneni okanye ekuphumeni kwakho. Le equine yanyikimisa umthi weentyatyambo wosuku olukhulu.
18. IiLlamas kumtshato welizwe
Imbonakalo yeNtaka etyheli
Xa ubhukisha ifama ye-llama njengendawo yakho yomtshato, imifanekiso yomtshato kunye nezidalwa ezinoboya kufuneka.
19. Imizobo Yomtshato neMfuyo
Ifoto ye-Dreamlove, Indawo: I-Barn kwiiFama zoKhuseleko, Uyilo lweentyatyambo: Ifama yeentyatyambo zeentyatyambo
Ngexesha leseshoni yomzobo kulo mtshato wasefama, umtshakazi nomyeni bathathe umzuzwana ukuba babe ngumhlobo womtshato onemilenze emine.
20. Indawo yomtshato ozinzileyo wamahashe
Ifoto ye-Dreamlove, Indawo: I-Barn kwiiFama zoKhuseleko, Ukucwangciswa komsitho: Umcimbi oChongiweyo
Abathandi bamahashe, ukubopha iqhina kwisitali (esihlanjululwe kakuhle) yindlela entle yokuhlonipha uthando lwakho lwazo zonke izinto zamahashe.
21. Umtshato uphuma ehashe
Esi sibini siwushiye umtshato waso we-rustic ongaphandle ngehashe.
22. Amanani eTafile yamaHashe amaModeli
URebecca Yale Photography, UCwangciso loMsitho: Imitshato ye-Amorology, Izinto zokubhala: Uyilo lwe-Epoch
Amahashe omzekelo weCalligraphed akhonza njengeenombolo zetafile kunye nokongezwa kokutsala ngamehlo kwindawo esembindini kulo mtshato we-chic we-rustic.
Iingubo zekorale kunye nobukhulu bomtshato
23. Amakhadi amaModeli okuHamba amaHashe
Iindwendwe nazo ziwushiye umtshato kunye namahashe omzekelo we-calligraphed aphindwe kabini njengamakhadi okuhambisa kunye nolwalamano lomtshato.
Yizisa ubuhle belizwe kumhla wakho womtshato ukusuka ekuhambeni ngokufaka isibhambathiso sakho sesibhambathiso ngokuchaphazela i-bucolic.
24. I-Woodsy Chapel Fram
UMicahala Vaughn Photography , Indawo: Sainte Terre
Olu lwakhiwo lwesakhelo sokhuni yindawo yangasemva efanelekileyo yokutshintshiselana ngesibambiso somthi.
25. Intsimi yeentyatyambo zasendle
UFred's Photography LLC, Uyilo lweentyatyambo: Holly Heider Chapple, Indawo: Ithemba leFama yeFama
Intsimi esemaphandleni yeentyatyambo zasendle yayisebenza njengeyona ndawo ifanelekileyo kwesi sibini.
26. Ukutshintshiselana ngezibhambathiso kwiintaba
UCarlie Statsky, UCwangciso loMsitho: Uyabandakanyeka kwaye uphefumlelwe, Indawo: IHolman Ranch , Uyilo lweentyatyambo: Gavita Flora
Izitulo ezinqamlezayo zomthi kunye nesibingelelo seplanga esidityaniswe nalo mtshato womtshato ujikeleze intaba.
27. Umsitho Womtshato Wasemaphandleni WesiNgesi
Ifoto nguAly Carroll , Uyilo lweentyatyambo: PepperHarrow Farm
Iintyatyambo ezichumileyo ezikumngcelele walo msitho womtshato zisisa kwangoko kumhlaba weentyatyambo zasendle kwilali yaseNgilani.
28. Umsitho woManyano lokuNkcenkceshela izityalo
Ukufota kweNyanga yeNyanga
Iindawo ezisemaphandleni zinokwazisa nganye nganye ngeenkcukacha zomtshato wakho we-rustic, kubandakanya nomsitho wobunye. Esi sibini sikhethe ukunkcenkceshela isipaji esincinci ngexesha lomsitho wabo wangaphandle.
29. Umsitho womtshato waseRustic entlango
Izityalo ezinamanzi, iingubo kunye nefenitshala yeenkuni zazisa umanyano kunye nobuntu kulo msitho ungaphandle embindini wentlango.
30. Umnyhadala woMtshato oManyeneyo weBhulorho
U-Lauren R Swann Ufoto, Indawo: I-Covered Bridge Inn, Uyilo lweentyatyambo: Ipati yeGadi, UCwangciso loMsitho: iGrit & Grace
Uninzi lwasemaphandleni ePennsylvania nakwimimandla ejikelezileyo ineebhlorho ezinembali. Esi sibini sikhethe ukuqaqambisa ibhulorho enjalo ngokuyisebenzisa njengendawo yasemva komsitho womtshato wabo wangaphandle.
Iyure ye-Cocktail inokuba yinxalenye yenguqu yomsitho womtshato, kodwa izicwangciso zeyure emangalisayo ye-cocktail akufuneki zijongwe. Ukusuka ekusebenzeni i-cocktail etyikityiweyo yelizwe ukuyila amaqela e-lounge afanelekileyo, kukho iindlela ezininzi zokuzisa ilizwe emaphandleni kwizicwangciso zakho zeyure ye-cocktail.
31. Itafile yeeNcwadi zeeNdwendwe zeeLori zeVini
Izinto ezigciniweyo, ezindala zihlala zimboleka kakuhle kubuhle belizwe. Apha, endaweni yetafile yencwadi yeendwendwe zesiko, esi sibini sisebenzise ibhedi yelori yeveni yokugcina incwadi yabo yeendwendwe.
32. Isikhanyiso sendlela
ILiron Erel kunye neCo , Indawo: Chesterwood, UCwangciso loMtshato: Imitshato engama-42 emaNtla
Indlela ye-luminaria ekhokele iindwendwe ukusuka kwindawo yomsitho ukuya kolwamkelo kule ndawo ye-bucolic.
33. Isihlahla somthi esihlala sihlaza
Ngelixa ilizwe elininzi kunye nemibono yomtshato we-rustic zihlala zibandakanya ukhuni, ukusuka kwiziphunzi zomthi ukuya kwiipelethi, cinga ngendlela onokuthi uyizise ngayo imithi ephilayo kunye nezinto ezintsha zendalo kumhla wakho.
34. Ilizwe lase-Upscale Bar yeCocktail
Ifoto kaTamara Gruner, Indawo: Ngomhla we-10 , Uyilo lweentyatyambo: Yonder Floral kunye neNdlu yokuhombisa, Ukucwangciswa komtshato: Chwetheza uMbutho
Esinye isikhumbuzi sokuba imitshato yelizwe akufuneki ibe nomxholo womtshato okhawulezileyo. Olu seto lothando lweyure yokuseta luye lwangayijonga indawo ethe cwaka yeentaba.
yintoni mrs imele
35. Ifanitshala yeLounge engafaniyo
Mfanekiso othandekayo , UCwangciso loMsitho: UJessica Ashley Iziganeko, Indawo: IBarn eWillow Brook, Iirenti: iBella Villa
Ukukhetha iinkcukacha zemitshato ye-rustic ye-rustic ephefumlelweyo enokunceda ukuqinisa ilizwe lakho, njengoko eli qela lounge lingalinganiyo lenzile.
Zimnkile iintsuku zokuqhekeka, itwine, iingqayi zamasoni kunye neebhali zehay kuba wonke umntu uyazisebenzisa. Ngelixa kunokubakho indlela yokufaka ingqayi yemason enencasa apha okanye phaya, sithanda ukwenza izigqibo zoyilo lomtshato ngokuzenzela kunye nokuzimisela engqondweni. Musa nje ukuskrolela kwiPinterest ukukopa konke okwenziwa ngumtshato okwenzayo, uchithe ixesha elithile ucinga ngeendlela zokucwangcisa ulwamkelo lomtshato welizwe elibonisa isitayile sakho kunye nezinto onomdla kuzo. Ukuba ekugqibeleni oko kuthetha ukuba ukhetha ukuzisa i-twine okanye iinkcukacha zesitampu somthi ngokunencasa, makube njalo! Qiniseka nje ukuba ucwangcisa umtshato wakho, indlela yakho.
36. Imbaleki yetafile yelinen
Ifoto kaJen Fariello, Ukucwangciswa komtshato: Iziganeko zeDonovan-Groves, Uyilo lweentyatyambo: Ubume bendalo
Endaweni yamalaphu etafile, ezi tafile zefama zifumene uhlaziyo oluhle ngeembaleki zetafile yelinen yegawuzy. I-Nora Sheils ye Ingqekembe yePhepha leRwala kwaye Ulonwabo lomtshato ucela ukuba-weds ukuba 'nceda, nantoni na oyenzayo, thintela i-burlap kwimitshato yelizwe. Oku kugqityiwe kwiminyaka embalwa emva ukuba andikaze ndifune ukuphinda ndibubone ubume kwakhona! Ngapha koko, ibolekisa kwimibhiyozo engaqhelekanga. Endaweni yoko, cinga ukusebenzisa ilaphu elisukiweyo kodwa elilungisiweyo kwi napkin yakho nakwilinen. '
37. Izitulo zokwamkela iinkuni
Ifoto kaJoanna Robertson , Ukucwangciswa komtshato: UKasey Lee kunye noC
Izitulo ezinqamlezileyo ezenziwe ngobusi zongeze ubushushu kolu luyilo lwetafile yokwamkela.
38. UFern Decor Motif
ILiron Erel kunye neC. , Ucwangciso lomtshato: Imitshato engama-42 emaNtla, Linens: Itheyibhile, Iirenti: Boleka iBlu, Uyilo lweentyatyambo: UCarolyn Valenti Iintyatyambo
Indlela entle yokuqinisa ubuhle bakho kukufumana iindawo ezininzi kuyilo lomtshato ukuze usebenzise umxholo. Apha, i-ferns yenze ukubonakala kokubini kwindawo esembindini nakumakhadi emenyu.
39. Isithuthi sokubaleka iTraki
Itraki yeveni yokuvuna, exhonxwe ngesithsaba segolide, yindlela entle yokubaleka kwizibini ezithi 'ndiyayenza' kwindawo yomtshato ebarn.
40. amalaphu etafile
UJeremy Chou Photography, UCwangciso loMsitho: Iindawo ekuyiwa kuzo nguDenise , Indawo: ISaddlerock Ranch , Uyilo lweentyatyambo: IPoppy Design Co.
Ilizwe kunye nemixholo yomtshato we-rustic ayidingi ukubandakanya iitafile zeenkuni zomthi. Lo mtshato welizwe ubandakanya umbala ongathathi hlangothi wombala wephalethi ngokusebenzisa iitafile zekrimu kunye nokuthamba okuthambileyo.
41. IiRandi zeRustic Chandeliers
URebecca Yale Photography, Indawo: IVista yelizwe yeVista, Ucwangciso lomtshato: Imitshato ye-Amorology, Uyilo lweentyatyambo: I-Oak kunye ne-Owl
Iikhandlela zigqitywe ngohlobo oluhlaza oluvulekileyo kulo mtshato wokuwa.
ukucoca kunye nokulondolozwa kwengubo yomtshato
42. Indawo yomtshato omhlophe
Ifoto nguAly Carroll , Indawo: Iziganeko zeDiak Oak
Esi sibini sathi 'ndiyayenza' kwindawo yomtshato egciniweyo emhlophe.
43. Izibane eziKhanyayo zomtya
U-Anna Delores Ukufota
Njengokutshona kwelanga, izibane zomtya zongeze ubushushu obufudumeleyo kulomtshato wangaphandle.
Ikhekhe lomtshato sisiseko semitshato emininzi kwaye yenye indawo entle yokuqinisa imibala yakho yomtshato kunye nomxholo womtshato okhethiweyo. Ukusuka ekukhetheni iiteki zekhekhe lomthendeleko ukuya ekugxininiseni idessert yakho ngeentyatyambo zasendle, ukhetho lwekhekhe lomtshato lelizwe lakho alupheli.
44. Ikhekhe lomtshato wasendle
USamantha James Photography, Ikhekhe: Dade Pie
Iintyatyambo zasendle ezicinezelweyo zazisa i-whimsical vibe kule duo yekhekhe lomtshato.
45. Umboniso wetheyibhile yomtshato ozalisiweyo
URebecca Yale Photography, Ikhekhe: Hee apho, ikhekhe! , Uyilo lweentyatyambo: I-Oak kunye ne-Owl
Ngelixa le khekhe lomtshato lihle lilodwa, umboniso weetafile zekhekhe ezizele intyatyambo uyikhuphe ngaphandle epakini.
46. ​​Ikhekhe lomtshato lelizwe elincinci
UBonnie Sen Photography, Ukucwangciswa komtshato: Iziganeko zeVieira
Ngamanye amaxesha kuncinci kuninzi. Apha, i-sprig elula eluhlaza kunye neziqhamo ezitsha zizo zonke ikhekhe lomtshato elifunekayo.
47. Ikhekhe ngeeFerns kunye nokuphefumla komntwana
J. Harper Ukufota
Iiferns kunye nokuphefumla kosana kuzise ilizwe eligqibeleleyo lokuziva kule khekhe lomtshato linqunu elinemigangatho emithathu.
48. ikeyiki yomtshato yelizwe yanamhlanje
UKayla Barker oLungileyo woFoto, Ikhekhe: Ihotele yaseGage
Iipesika zepesika kunye nokuhlaza okugqityiweyo kugqibe ikhekhe elimhlophe elinemigangatho emithathu kwindawo emhlophe yekhekhe legolide.
49. Ikhekhe Lomtshato Elizwe Elinye
UJeny Fu, Ikhekhe: IPip kunye neBits
Utshani obomileyo buzalise icing enamacwecwe, ukuqinisa ngakumbi umxholo womtshato we-chic we-rustic.
50. Ikhekhe lomtshato elinguFern elincinci
UMikhail Glabets Photography Yomtshato, Ikhekhe: Iikhekhe zelizwe laseMntla
Amagqabi amafern ambalwa anike ikhekhe lomtshato elihlambulukileyo nelicocekileyo ukubukeka kwelizwe elifihlakeleyo.
uzonxiba ntoni ngomtshato kaDecember
ukunxiba iringi yomtshato
indlela yokubuza iintombi eziza kutshata ukuba zize emtshatweni
ezona ndawo zokungcebeleka kubandakanywa i-honeymoon kubhajethi
iikhabhathi zasekhitshini izimvo zokuhombisa